Dingana 11 hahatratrarana ny logo tonga lafatra | Famoronana an-tserasera
Dingana 11 mankany amin'ny sary famantarana tonga lafatra
Raha te hiasa sy mahomby ny sary famantarana dia tsy maintsy manana andian-dahatsoratra. Ny tanjona dia mitovy foana: Ataovy mora fantatry ny mpanjifa ny marika anay ary manamora ny fizotry ny famakiana. Izany no antony maha-zava-dehibe ny alohan'ny fanolorana mari-pamantarana marimaritra iraisana dia manao andiam-pitsapana maromaro na fanontaniana isika mba hahitana raha mandalo ny efijery ny volavolaintsika ary azo antoka fa izany no tena mety indrindra ary tena mifanaraka amin'ny hevitry ny orinasantsika. Amin'ny farany, ny momba azy io dia ny fananana famaritana mazava kokoa momba ny sary famantarana ny logo sy ny habetsahan'ny nuansa lehibe indrindra satria amin'ity fomba ity dia ho fantatsika ny fomba hitrandrahana ny tsirairay amin'ireo fahaiza-manaony. Ny fahafantarana ny hevitsika amin'ny fomba lalina ihany no ahafahantsika mamolavola ny sary famantarana tonga lafatra.
Fantatrao sahady fa imbetsaka isika dia nifantina ny fiasa sy ny toetra tokony hananan'ny logo tsara (ohatra ny lahatsoratra izay mifantoka amin'ny fanontaniana tokony hapetrakao amin'ny volavolanao), saingy nahita horonan-tsary iray tamina Internet tena mahaliana. Borja Acosta dia matihanina amin'ny famolavolana izay miteny aminay amin'ny fomba tena tsotra amin'ny lafiny sasany na fiasa tsy maintsy ananan'ny logo.
Ireto misy torohevitra omeny antsika:
Miasa mitsangana ve izy io?
Mety ve izany nefa tsy asitrika anaty boaty?
Azonao atao ve ny manintona azy haingana?
Tsy manana loharano mihoatra ny roa?
Lasa ara-bakiteny ve ilay abstract?
Ny marika no fitambaran'ny zava-drehetra, tsy izany ny sary famantarana.
Ny sary famantarana dia sosokevitra, fahatsapana, fambara.
Ny fango dia manandrana manome ny fahamendrehana, ny fahazavana ary ny fanekena ny marika.
Aza manahy be loatra momba ny manga na ny maintso, manahy sao teknika na lamaody ny fanamboarana.
Farito ny marika dia alefaso avy eo.
Atreho izany fa tsy ny rehetra no ho faly amin'ny valiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Dingana 11 mankany amin'ny sary famantarana tonga lafatra
Rubén Álvarez, mpanakanto espaniola izay namorona ny Adobe Photoshop CC Splash Screen 2015